အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဒူဘိုင်းကယောဘ WhatsApp ကို & Mobile က်ထမ်းခေါ်ယူမှု
ဒူဘိုင်းကယောဘ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ WhatsApp ကို & ်ထမ်းခေါ်ယူမှု။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့အကြောင်းကိုစကားပြောနေကြသည် ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာ အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် WhatsApp ကိုကျော်။ ကျနော်တို့ကျိန်းသေညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားအတွက်ပြည်ပရှိဖြစ်သင့်ကိုကူညီနိုင်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏မြို့တော်အသစ်ကျွမ်းကျင်သူများထက်ပိုငါးဆယ်ထောင်ပေါင်းများစွာထားရှိခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သင်တို့သည်ဤပြည်တော်ပြန်တဦးဖြစ်နိုငျသညျ,
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောင့်, ကုမ္ပဏီသင်အလုပ်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေကူညီပေးသည် သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာရှာကြာလော့။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ဤအရပ်၌ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်ယူအေအီး၌သင်တို့ကိုနေရာချပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သမျှ WhatsApp ကိုအပေါ်ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, သင်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအခြားသောလမ်းထားရန်သင့်အားယူအေအီးအတွက် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ၏စာရင်းဖြည့်စွက်ရန် join လို့ရပါတယ်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, သင်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည် အလုပ် အဆိုပါအတွင်းနေရာလွတ် ဒူဘိုင်း စီးတီးကုမ္ပဏီ။ ဤအချက်များအရ 50,000 အလုပ်ရှာဖွေသူများကျော်အပတ်တိုင်းစစ်ဆေးနေစောင့်ရှောက် WhatsApp ကိုအပေါ်အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု။ ၏ဗဟို၌တည်၏ မိုဘိုင်းဖုန်းစုဆောင်းမှုs, သင်အမြဲပြန်လာနိုင်ပါတယ် ပိုပြီးအဘို့ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ post ကို။ ရှင်းမှ, ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, WhatsApp ကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသန်း 1,6 ကျော်အသုံးပြုသူများနှင့်ပေါက်နေသည်။
အပေါ်စာပို့ WhatsApp ကို ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့
မိုဘိုင်းဖုန်းအလုပ်အကိုင်များ၏ဗဟိုမှာတော့ ရှာဖွေနေ ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များကွန်ယက်ကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအပြုသဘောဘက်တွင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအနည်းဆုံး၏ကြားဖူးတယ်အတော်လေးသေချာ WhatsApp ကိုထမ်းခေါ်ယူမှု။ အံ့သြစရာကောင်းတာကတကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အကျော်ကြားဆုံးစုဆောင်းမှုအုပ်စုများလုပ်နေပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ app ကိုဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့ 20,000 ၏ဝန်တို google ကနေစုဆောင်းအေးဂျင့်. နှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကျွန်တော်ငှားရမ်းဘို့ငါတို့မိုဘိုင်း application ကိုအသုံးပြုပါ။ အလင်းတော်၌ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီ, သင်သာတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုကွာနေပါပြီ! ဒါကြောင့် ယနေ့သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload.
ဒူဘိုင်းကယောဘ WhatsApp ကို - ကြောင်းအစာရှောင်ခြင်းရယူပါ!
WhatsApp ကို - အများစုမှာအဆိုပါအရှေ့အလယ်ပိုင်း်ထမ်းခေါ်ယူမှု Tool ကိုအသုံးပြု?
WhatsApp ကိုကောင်းကင်တမန်၏ရည်ရွယ်ချက် ယူအေအီးအတွက်စုဆောင်းမှုများအတွက်။ သင်တစ်ဦး WhatsApp ကိုဖြစ်ပါတယ်သုံးပြီးဘာလို့အကြောင်းပြချက်ရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အတွက်ကိုကြည့်ကြရအောင် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဘို့ကြီးသော။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, Whatsapp ကိုဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဒူဘိုင်းအတွက်အင်တာဗျူးသွားကောင်းတစ်ဦး option တစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျ WhatsApp ကိုအကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သငျသညျ 50,000 ကျော်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ် WhatsApp ကိုသငျသညျကို download လုပ်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါသူတို့အခွအေနမြေား, လက်အောက်တွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပြည်တော်ပြန်အသစ်က profile များကိုဖွင့်လှစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦး Careerjet ကုမ္ပဏီ နှင့် ယူအေအီးအတွက်နဂါးကုမ္ပဏီ။ သူတို့ဟာထိပ်တန်းမှတ်ပုံတင်တကယ်တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပွငျအကောင့်ရှာဖွေနေအခမဲ့အလုပ်ဖန်တီးပါ။
ဒူဘိုင်းကယောဘ WhatsApp ကို? ဟုတ်ကဲ့, သင်ကဒူဘိုင်းဖြစ်ပျက်စေနိုင်သည်.
WhatsApp ကိုထမ်းခေါ်ယူမှု Group မှ
အဘယ်ကြောင့် WhatsApp ကိုစုဆောင်းမှုအာရှရှိနိုင်အောင်ပေါ်ပြူလာဖြစ်သနည်း
အခြိနျမှနျမှစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အအုပ်စုကိုအိန္ဒိယအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေ WhatsApp ကို။ ရှိရာပထမနေရာအတွက် အိန္ဒိယတွင် Whatsapp အလုပ်အကိုင်များ အခမဲ့စုဆောင်းမှု tool ကိုများအတွက်အာရှတိုက်မှာထိပ်တန်း rated ကုမ္ပဏီများကပေါ်ပြူလာဖြစ်လာသည်။ ခဏ၌ဤတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကို WhatsApp ကိုဂျော့ဘ်ရန်အလွန်တိကျတဲ့ဖြစ်လာသည်။ ဤအတူစိတ်တွင်မိုဘိုင်း apps များအပေါ်တိုက်ရိုက်စာပို့ခြင်း 2013 ကတည်းကစူပါလူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။ WhatsApp ကိုအုပ်စုဖြစ်သည့်၏ပြန်လုပ်မှ ပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာအိန္ဒိယကနေအလုပ်ရှာတွေ့ဖို့အကောင်းဆုံး ?.
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သူတို့ကိုမဆိုအကောင်းရှိပါတယ်။ မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်, များစွာသောလူဒူဘိုင်းမှအိန္ဒိယကနေရွေ့လျား။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ယခုကြှနျုပျတို့ 80,000 အလုပ်ရှာဖွေသူများကွန်ယက်ကိုထက်ပိုမိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, လူမှုရေးမီဒီယာလိုင်းများကျော်ကျနော်တို့ဘီလီယံခန့် 3,2 ကျော် WhatsApp ကိုကိုယျစားလှယျလောငျးရောက်ရှိပါပြီ။ အာရုံနှင့်အတူ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများ နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအသုံးပြုသူ 3.7 ဘီလီယံအထိ။ အိန္ဒိယနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသုံးပြုသူများနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံအချို့။
ဒူဘိုင်းကယောဘအပေါ် WhatsApp ကို အိန္ဒိယတွင်
ထိုသို့သောကြီးမားတဲ့ပရိသတ်ကိုနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် အိႏၵိယ နှင့်ပါကစ္စတန်။ WhatsApp ကိုအလွန်အားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေး အလုပ်ရှာဖွေရေးဆုံးမဩဝါဒပေးဘို့ကောင်းသော options များ။ အလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးအကြီးအကြီးတွေဒေတာဘေ့စနှင့်အတူအခြားတစ်ဖက်တွင်အာရှကနေ source ရန်။ ကျနော်တို့ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်အလွန်ကောင်းသောစုဆောင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုရနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ဗီဇာအကူအညီပေးကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ဆန္ဒရှိနေသောထိုအကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်အများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ ဒူဘိုင်းကယောဘ WhatsApp ကိုသငျသညျဥပမာမိုဘိုင်းအပေါ်အများကြီးအချိန်ကိုမဖြုန်းပါလျှင်ကွယ်ပျောက်သင့်ထံမှဖြစ်ကြသည်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်နေ့တိုင်း 120 မိနစ်အထိဖြုန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းကိုပေးပို့ခြင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အကူအညီတောငျးဆိုများအတွက်ရေရှည်မှာ။ သညျကား, တစ်ဦးကအလုပ်ရှာဖွေနေသူလမ်းညွှန် အကောင်းဆုံးကို 7-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်များဖြစ်ပါသည်, အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, သင်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများမှတစ်ဦးအမြန်သတိပညာ Message ပေးပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအကြောင်းကိုခြုံငုံတခါထဲမေးခှနျးက WhatsApp ကိုအပေါ်ဒူဘိုင်းကယောဘ ပိုဖွယ်ရှိဖြေကြားကြလိမ့်မည်။
ဒူဘိုင်းကယောဘ WhatsApp ကို - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသည်
ဒူဘိုင်းကယောဘကို အသုံးပြု. ဒူဘိုင်းမှအိန္ဒိယကနေပြောင်းရွှေ့ WhatsApp ကို
ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ကျနော်တို့အကြောင်းကိုရေးသားဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းမှအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အနေဖြင့်နေရာပြောင်းရွှေ့။ အပြုသဘောဘက်တွင်, အိန္ဒိယတွင် WhatsApp ကို နှင့်ယူအေအီး ပို. လူကြိုက်များအခြားနိုင်ငံများထက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်မုဆိုးဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းမှုအသင်းထံမှလတ်ဆတ်တဲ့မြန်ဆန်တုံ့ပြန်မှုလာပြီ။ နှင့်ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းရာမှအလုပ်မှာအီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိသည့်ပထမနေရာဖောက်သည်ရုတ်တရက်အပေါငျးတို့သ။ နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်, သငျသညျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်သငျ့သညျ။
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိကျနော်တို့ယူအေအီးအတွက် 50 ဒူဘိုင်းကယောဘ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များကျော်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်တကွသင်စဉ်းစားသည့်အခါ ရွေ့လျား ဒူဘိုင်းမှ သင်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီဆက်သွယ်ပြီးစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ Correspondingly နှင့်ယဉ်ကျေးသငျသညျကိုသူတို့သငျသညျမှပေးသောအသေးစိတျအားဖြင့်လွှမ်းရသင့်ပါတယ်။ ထိုလူအပေါင်းတို့အရာတို့ကိုသင် သငျသညျပြည်ပမှာရွှေ့ကူညီန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်း WhatsApp ကို ရှာဖွေစုဆောင်းအထောက်အကူဖြစ်ကြောင်း
အကြောင်းပြ ဒူဘိုင်းရှာဖွေစုဆောင်း ယူအေအီးအတွက်အသစ်တခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုပုံဥပမာအဖြစ်။ WhatsApp ကိုစုဆောင်းမှု၏ဂုဏ်အသရေကိုမြင်လျှင်။ အလုပ်ရှင်နှင့် / သို့မဟုတ်ထမ်းရှာဖွေသူအကျိုးဆက်ရိုးရှင်းသောမိုဘိုင်းချက်တင်ပေါ်မှာချိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ pdf ကြော်ငြာသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံကြော်ငြာတင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှာဖွေစုဆောင်းကိုရှာဖွေရန်ဤအကြောင်းပြချက်သည်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအစားအွန်လိုင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်း 100 များအတွက်ပတ်လည်ရှာဖွေနေနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ နဲ့ကြီးမားတဲ့အချိန်ချွေတာမှုစနစ်အေးဂျင့်တစ်ဦးကမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာမြင့်မားသောပရိုဖိုင်းကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း၏ရလဒ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထဲမှာ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအလုပ်ရှာဖွေသူများ, အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုထက်နည်း 1 မိအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အသစ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများသတိပြုမိလာသဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းသော်လည်း ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ် WhatsApp ကိုစုဆောင်းမှုမန်နေဂျာ။ သငျသညျမိုဘိုင်းအပေါ်တက်ကြွမြင့်မားအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးပရိုဖိုင်းကိုစောင့်ရှောက်သောအခွအေနတွင်။ အုပ်စုများလာရောက်ပူးပေါင်းရန်ဤရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ ယူအေအီးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက် ဆွေးနွေးမှုများ။ မိုဘိုင်း application ကိုကျော်ဒါ့အပြင်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ် တစ်ဦးဒူဘိုင်းကယောဘလာပြီ.
WhatsApp ကို ရှိပါတယ် တက်ကြွအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ
တဦးတည်းအရာများအတွက်, တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, လအနည်းငယ်ဒေါင်းလုပ်ပြီးနောက် WhatsApp ကို မက်ဆေ့ခ်ျကိုလျှောက်လွှာ။ သင်တန်း၏အသုံးပြုသူ 86%,အဆိုပါ platform ပေါ်တွင်နေဆဲတက်ကြွနေကြသည်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပြောနေတာနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်ရှာဖွေနေစဉ်။ ဆက်ဆက်နှင့်အတူဒူဘိုင်း၌သစ်စာစောငျ့သိအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူဒေတာဘေ့စရှာဖွေစုဆောင်းနေတဲ့အိပ်မက်အနေအထားအားဖြင့်သင်တို့ကိုကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်လျှင် MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူဘွဲ့ရဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ ကျနော်တို့တကယ်သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပါသည်အတိုင်းဤမိုဘိုင်းဖုန်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပလက်ဖောင်းလာမည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွက်နေဖို့မြင့်တက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး 2020 ကုန်စည်ပြပွဲသို့မရောက်မှီတိုင်အောင် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ အနာဂတ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာတော့ဒူဘိုင်းအများအပြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ LinkedIn ကဲ့သို့သောအခြားလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများအကြောင်းကိုမေ့လျော့ကြ၏။ ဒီလက်ငင်းမှာသူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစျေးကွက်များအတွက် tool ကိုအဖြစ် WhatsApp ကိုစဉ်းစားရန်ကိုစတင်ပါ။ ပင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကြောင်းစတင်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူအထိ ပစ်မှတ်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ကြော်ငြာတွေများအတွက်.
ဒူဘိုင်းကယောဘ WhatsApp ကို - Ger အလုပ်တစ်ခုယနေ့ !.
ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်ပေါ် WhatsApp ကို နိုင်ငံတကာန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအဘို့
နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲအံ့သြဖွယ် WhatsApp ကို tool ကိုနှင့်အတူစတင်ကျွန်တော် 100% အခမဲ့ပြောသင့်ပါတယ်။ သငျသညျဒီ app ကိုပေးခြင်း (184 နိုင်ငံများတွင်ကျော်) လောကအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နိုင်ပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိတွေ့မှုများအတွက်အကြွေး။ အနှစ်သာရများတွင် App ကိုကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလူသားမျိုးနွယ်လူဦးရေရဲ့ 55.6% ကအသုံးပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, တကယ့်ကိုရိုးရှင်းပြီးအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည် ပြည်တော်ပြန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးစုဆောင်းမှုများအတွက်ပလက်ဖောင်း.
HR မန်နေဂျာများကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာဖွေဖို့အလွန်အမင်းခက်ခဲရောက်ရှိဖို့ဒီ app သုံးပြီးအချိန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ထင်သကဲ့သို့ရုတ်တရက်အားလုံး ယူအေအီးကနေအလုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, ကာတာ, ဆော်ဒီအာရေဗျ နှင့်ကနေဒါ။ ဤအတောအတွင်းကြောင့်လည်းလူမှုမီဒီယာမှသာဖုန်းများကိုအသုံးမပြုသူကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရောက်ရှိဖို့အလွန်ကြီးစွာသော tool ကိုဖွင် WhatsApp ကို။ ထိုအတောအတွင်းထိုင်မဒူဘိုင်းကနေအလုပ်အခွင့်အလမ်းများကိုစောင့်ပါ။ ချက်ချင်း Start နှင့်တစ်ဦးမခေါ်မယ့်ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်အောင် စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်.
ဒူဘိုင်းယောဘနှငျ့ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ
သင်သည်သင်၏ထဲကအများဆုံးရအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား WhatsApp ကိုအလုပ်ရှာဖွေ။ ထူးခြားသည်အခြားနည်းလမ်းများကိုယင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ပလက်ဖောင်းရန်။ သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်အတွက်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများရောက်ရှိရန်ကူညီပါလိမ့်မယ်။ အမှန်တကယ်, သင်တစ်ဦး Philipino အလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်ကယူအေအီးအတွက် WhatsApp ကိုအုပျစုမြားကိုဖနျတီးနှင့် join ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူဤဖြစ်ကောင်းသုံးစွဲဖို့ရှာဖွေစုဆောင်းများအတွက်အကောင်းဆုံး WhatsApp ကို feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ WhatsApp ကိုစုဆောင်းမှုအုပ်စုများ join လို့ရပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ငါတို့သည်သင်တို့၏ CV post လုပ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ 50 အုပ်စုများကျော်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ အလုပ်ရှာဖွေ၏ရည်ရွယ်ချက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုများ၏အသီးအသီး 256 အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တက်ကြွစွာရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူအထိရှိသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအသီးအသီးစုဆောင်းမှု post ကိုစုစည်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ အသီးအသီးထမ်းရှာဖွေသူတစ်ဦးလျှင်တစ်ဦးတည်းသာကြော်ငြာနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦးလျှင်တစ်ဦးကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပ်လုဒ်ကိုခွင့်ပြုခဲ့ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများ.
WhatsApp ကိုစုဆောင်းမှု အေးဂျင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများတစ်တုံ့ပြန်မှုပြုပါ
၏ရည်ရွယ်ချက် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ, ကျွန်တော်တစ်ဦး post ကိုလုပ်ဖို့အသီးအသီးထမ်းရှာဖွေသူစည်းရုံး။ အခြား သင်တို့အဘို့အ key ကိုအမှတ်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီအဘို့အကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်သည်အနေနဲ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အခန်းကဏ္ဍရိုးရှင်းသောလွှတ်တင်ခြင်းကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းရှာနေလျှင်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ, အဖြစ်မှန်အတွက်တစ်ဦးကိုဖန်ဆင်း သက်ဆိုင်ရာ ယူအေအီးအတွက်အုပ်စုတစ်စု။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုထုတ်ထုံးစံစျေးကွက်များကဲ့သို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏စစ်မှန်သော 80% ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အဖွဲ့ကိုအဖွဲ့ဝင်ယူအေအီးအလုပ်အေးဂျင့်ကနေတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းကြဘူးပေမယ့်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ကိုအသုံးပြုသူများသည် ဒူဘိုင်း HR မန်နေဂျာများမှနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှင့်လိပ်စာစာအုပ်ပေးပို့ခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ကိုအုပျစုတွင်, သငျသညျကိုတောင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေအကူအညီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်မကြာခဏစုဆောင်းမှုအေးဂျင့်များနှင့်ကုမ္ပဏီများရန်သင့်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်သွင်းလျှင်သင်ဖို့တာဝန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ.
ဒူဘိုင်းကယောဘ WhatsApp ကို - သင့်ဖုန်းကို Drop နှင့်အလုပ်အကိုင်အဘို့ချိတ်ဆက်ပါ။
အဘယ်သို့ငါအလျင်အမြန်တုံ့ပြန်ချက် get နှင့်အလုပ်အကိုင်အစည်းရုံးနိုင်သလဲ
ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, သငျသညျလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေစုစည်းနိုင်ပါတယ်။ နှင့် သင်တို့ကဲ့သို့ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များကွန်ယက်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အတူချိတ်ဆက်။ ထိုကဲ့သို့သောဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအဖြစ်တည်နေရာအလိုက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ segmenting ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။ အလုပ်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ်အသက်ကြီးမှုပင်အဆင့်ကိုအညီအမျှအရေးကြီးပါတယ်။ အခြားဘာမျှမပြော ယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့လျှောက်ထားတွင်ကျယ်စွာ။ ထိုသို့တကယ်ကိုရိုးစေသည်ဘယ်မှာ CV ကိုပေးပို့ခြင်း.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့လက်ျာကလူများ၏ရှေ့မှောက်၌သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များပေးပို့ရန်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူသည်ငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ် အားလုံးဒူဘိုင်းစီးတီးကျော်? အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအကြီးတန်းမန်နေဂျာနှင့်အတူကျနော်တို့ဒူဘိုင်းရန်သင့်လှုပ်ရှားမှုစည်းရုံးရေးအချို့အကူအညီပေးသညျ။ တနည်းအားဖြင့်အံ့သြဖွယ်အလုပ်တစ်ခု profile များကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်မိုဘိုင်းစုဆောင်းမှုပွုစုပြိုးထော။ အဖြစ်တာ WhatsApp ကိုအပေါ်ရှာဖွေစုဆောင်းအသစ်အခွက်တဆယ်ရေကန်ကိုစုသိမ်းအဖြစ်ကိုအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းစေသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ.
ဒူဘိုင်းကယောဘ WhatsApp ကိုလျှောက်လွှာနှင့်အတူရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။
အဆိုပါအချက်မကြာခဏသင်အလုပ်ရှာဖွေရေးပြုကြသည့်အခါအသစ်တစ်ခု CV ကိုဖန်တီးအပြေးအလွှားအမြန်ဖြစ်ပါတယ်သတိမမူ။ သိသိသာသာ၏ CV ကိုအပေါ်အမှားတွေမည်မဟုတ်လုပ်နေတာ ရန်သင့်အားကူညီ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကနေတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းခံရသောအခါအရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားမှထောက်ပြ စုဆောင်းဖို့ WhatsApp ကို။ ထိုသူတို့နောက်ကျောကသူတို့ရဲ့ CV ကိုရနျလိုအပျအင်တာဗျူးနေတဲ့တုန့်ပြန်ရတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအသေးစိတျအာရုံနှင့်အတူကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖမ်းပြီး ဒူဘိုင်းရှိ HR မန်နေဂျာသို့မဟုတ်စုဆောင်းမှုဒါရိုက်တာ၏အကျိုးစီးပွားမြှင့်။ သိသာထင်ရှားတဲ့သင်သည်သင်၏လက်မှတ်များနှင့်အတူပုံရိပ်တွေကိုပင်ပေးပို့နိုင်သည် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ.
ထိုကြောင့်သင်သည်လည်းအမြန် WhatsApp ကိုဗီဒီယိုကကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပြုပါနှင့်မန်နေဂျာများငှားရမ်းဖို့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အောင်သောကြောင့် အလုပ်လျှောက်လွှာ အလွန်ကောင်းတဲ့နှင့်သွားကြဖို့လွယ်ကူပါတယ် သင်ခွင့်ပြု ပိုကောင်းတဲ့ရန် ဒူဘိုင်းစီးတီးရှိအလုပ်။ သင်တစ်ဦးအဘို့အပင်ပိုကောင်းအလုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လာဖို့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းထွက်စျေးကွက်နှင့်အတူအရှိန်မြှင့်ကူညီခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အတွက်နည်းလမ်းများ စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာ.
သင်တို့သည်လည်းဒူဘိုင်းယောဘသည်များအတွက် WhatsApp ကိုအုပျစုမြားဖနျတီးနိုငျ:
ပွင့်လင်းစတင်နိုင်ဘို့ WhatsApp ကိုလျှောက်လွှာ နှင့်ချက်တင်မျက်နှာပြင်မှရွှေ့
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်သည်, WhatsApp ကိုမျက်နှာပြင်၏ထိပ်ကိုသွားသစ်ကိုအုပ်စုတစုကိုကလစ်ဖွင့်လှစ်
သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်တစ်ဦးအနေဖြင့်အုပ်စုတပြင်လုံးကို add အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတွင်
အနှစ်ချုပ်ရန်သင်၏နာမည်တစ်ခုထပ်ထည့်ဖို့လိုတယ် WhatsApp ကိုအုပျစု
ဒူဘိုင်းကယောဘ? WhatsApp ကိုမိုဘိုင်းစုဆောင်းမှု key ကိုပါ!
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း, ဒီပရိုမို WhatsApp ကိုဗီဒီယိုကကြည့်ရှိသည်။ ကျိန်းသေအခြားသော့ချက်အချက်သင်မည်သို့မှရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ် WhatsApp ကိုလျှောက်လွှာကိုတကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ WhatsApp ကိုကအကြီးဖွင့်အဘယ်ကြောင့်သင်ပြချင်ပါတယ် HR မန်နေဂျာများ, မိတ်ဆွေများနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းအခြားလူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်နေဖို့ option ကို။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင် WhatsApp ကိုမိုဘိုင်း application ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကမ္ဘာတဝှမ်းတခြားသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကအသုံးပြုချင်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော WhatsApp ကိုအဖြစ်ဒူဘိုင်းအလုပ် app ကိုကာလအစဉ်အမြဲတီထွင်အကြီးမြတ်ဆုံးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် သငျသညျအိန်ဒိယနိုငျငံမှလျှင်သင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနေပါသည်လျှင်။ နှင့်သင်တန်း၏, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏မြို့တော်ထဲမှာထည့်ထားခံရဖို့လိုပါတယ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကိုလည်းလူတွေနေ့တိုင်း access ကိုရရန်ကူညီခြင်း။ အထူးသဖြင့်မရ စျေးကွက်အတွက်ဒူဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြံဉာဏ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေနည်းလမ်းများကိုယ့်ကိုကိုယ်။ သင်အလွယ်တကူအများအပြားဌာနများနှင့်လူမှုရေးအုပ်စုများမှလူကြီးမင်း၏ CV ကိုမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ မြှင့်တင်ရေးအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတစ်ခုအံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေမတွေ့ရှိဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲ။ WhatsApp ကိုဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံး tools တွေကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဒူဘိုင်းအလုပ် App ကို - WhatsApp ကို တွန်းအားပေးကိုသုံးပါ သတိပေးချက် သငျသညျသတိပေး
နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ WhatsApp ကိုဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များကွန်ယက်ကို သတင်းစကားကိုဖတ်ပြီးသောအခါလျှောက်လွှာအသိပေးချက်များကိုအသုံးပြုသူများသည်။ ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ facebook messenger ကိုအလွန်ဆင်တူ option ကို updated ။ ထို့ကြောင့်အပြောင်းအလဲများကို၏ရလဒ်အဖြစ်မြောက်မြားစွာအခြားကုမ္ပဏီများကဤလမ်းကိုသွားနှင့်တိုက်ရိုက်သတင်းပေးပို့ခြင်းစနစ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်သင်လုပ်နိုင်သည် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်အတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ WhatsApp ကိုအပေါ်။ ယင်းကြောင့်, WhatsApp ကို အပြောင်းအလဲများကို 2016 စတင်။ သိသိသာသာအခြားအသုံးပြုသူများကိုစလှေတျမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ပြီးပါပြီတဲ့အခါမှာအသုံးပြုသူများသည်ကိုတွေ့မြင်ကြကုန်အံ့။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူဒါကြောင့်အခြားလူတစ်ဦးသည်အလွန်ရှည်ပြောနေတာပါ။
ထိုအရှည်လျားဖို့အထူးသဖြင့်လမ်း သငျသညျရိုးရှင်းစွာပေါ်ရွှေ့နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူ chat လို့ရပါတယ်ကိုတုံ့ပြန်။ သငျသညျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖြစ်ကောင်းစိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်မိန်းမအားစကားပြောနေကြသည်တဲ့အခါမှာအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်သည်အဘယ်သို့ဆိုရသို့မဟုတ်သင်သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, သင်သာဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့မည်မဟုတ် ဒူဘိုင်း 2018 အတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေရေးများအတွက်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, သေချာသင်တစ်ဦးသင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံစာရေးလုပ်ဒူဘိုင်းအလုပ် WhatsApp ကိုအတူရှုပ်ထွေးတက်မကျင့်။
ကျိန်းသေ, ငါတို့ကိုရန်သင့် WhatsApp ကိုအရေအတွက်က add!
သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတှေ့အကွုံက Short ဖော်ပြချက်
အပေါ်စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်တစ်ဦးတောင်းဆိုမှုကို Send Whatsapp
ရှင်းမှ, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကတခြားနှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစား အလုပ်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူကျနော်တို့အလွန်လျင်မြန်စွာ reply မ ကြှနျုပျတို့ပွုအကူအညီနဲ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာချရမည်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, Whatsapp ဒူဘိုင်းပေါ်တွင်သင်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများနှင့်အတူတိုတောင်းတဲ့စကားပြောဆိုမှုရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီမဆိုသက်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်ကိုထွက်ပေးပို့ပါ။ ထိုအခါနောက်တဖန်သင်သည်ယခုတက်မြန်ဆန်ဖို့လိုအပ်စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်များနှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုလိုလျှင်။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်သင်တို့နှင့်အတူအအင်တာဗျူးစီစဉ်နိုင်ပါတယ်။ အစည်းအဝေး၏ဘာမျှမပြောအလျင်အမြန်မှတဆင့်စုဆောင်းမန်နေဂျာနှင့်အတူကြိုတင်ဘွတ်ကင် WhatsApp ကိုအုပျစု အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာစကားလက်ဆုံ။ ဤစကားမှန်ပေမယ့်စုဆောင်းများအတွက် WhatsApp ကိုမိုဘိုင်းသုံးပြီးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့။ ဒီတစ်ခါလည်း Skype ကို အသုံးပြု. ထံမှကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အလားအလာနှင့်အတူအပြန်အလှန်အခါသင်အချိန်အများကြီးကယ်တင်မည်ကိုဆိုလိုသည်သောသူအပေါင်းတို့အားဖြင့် ဒူဘိုင်းအတွက်အေဂျင်စီများငှားရမ်း.
ဘာကြောင့်လဲ WhatsApp ကိုရဲ့ အစိမ်းရောင်အရောင်သတ္တုတူးဖော်ရေး?
အစိမ်းရောင်အရောင်: ဆန့်ကျင်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်ကြောင့်များနှင့်အစိမ်းရောင်အဘယ်အရာကိုအရောင်သတ္တုတူးဖော်ရေးကိုစတင်ပါစေ အသစ်သောအသက်, သက်တမ်းတိုးစွမ်းအင်, လတ်ဆတ်သောသဘာဝနှင့်စွမ်းအင်အစအဦးတူးဖော်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူခွင့်ပြုတိုးတက်မှုနှုန်းနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သဟဇာတသင်အရောင်ကိုကြည့်တဲ့အခါ key ကို, လတ်ဆတ်ဖြစ်ပြီး အဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အစိမ်းကိုလည်းဒေါ်လာငွေနှင့်ဆက်စပ်အစဉ်အလာတစ်ခုအထူးသဖြင့်လမ်းအတွက်လူသိများသည်။ ဒူဘိုင်း, ကြီးထွားလာဖို့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူဘဏ်လုပ်ငန်းအရောင်အတွက်သေချာသောဘဏ္ဍာရေးနှင့်ရည်မှန်းချက်ကိုပြန်လုပ်ပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင် Bing မှ, Yahoo နှင့် Google မှဤအဓိပ်ပါယျရနိုငျနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်အစားရှာဖွေစုဆောင်းများအတွက်နာရီထွက်စောင့်ဆိုင်း။ အကျိုးဆက်ကြောင့်အစိမ်းရောင်တောက်ပလိုဂိုသူတို့နှင့်အတူတောင်းဆို။ မကြာခဏသင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုနိုင် စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များများအတွက်စုဆောင်းမှုလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ မန်နေဂျာများ အခါတိုင်းကသင်တို့အဘို့အဆင်ပြေပါတယ်။
အများစုကဆွဲဆောင်မှုအထောက်အထား၏ဘာလို့အရောင်ကို WhatsApp ကို လိုဂိုအစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကျွန်တော်ယခုလက်ျာမေးခွန်းလာနှင့် ဘာယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အစိမ်းရောင်အရောင်သုံးစွဲဖို့အဘယ်ကြောင့် WhatsApp ကိုနှင့်အတူလက်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှာ, WhatsApp ကိုများအတွက်တော်တော်လေးအခြေခံယုတ္တိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါပဲ။ အထက်ဖော်ပြပါကြေညာချက်အနေဖြင့်ရေရှည်တွင်ဖြစ်စေကိစ္စတွင်နှင့်အတူ Whatsapp အရောင် GREEN ။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်အရောင်ဒီမိုဘိုင်း application ကိုအတူတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောဒေါင်းလုပ်နှုန်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဘယ်ကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အဓိကအချက်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုသူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အစိမ်းရောင်လိုဂိုတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအလွန်လုံခြုံ feeling စကားပြော။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို WhatsApp ကိုဒီဇိုင်းလန်းနှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစား။
ဤရွေ့ကား, မှတ်ချက်ပြုထားသည်အဖြစ် မိုဘိုင်း application ကို လူတွေစတေဲ့နှင့်မျှမငွေနှင့်ဆက်နွယ်နေသည် ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်အဘယ်အရာကိုပေးဆောင်ဖို့။ ဒူဘိုင်းကယောဘ WhatsApp ကို အလုပ်အကိုင်များဘို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်.
ဒူဘိုင်းကယောဘ WhatsApp ကို - အကောင်းဆုံး tool ကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်ရှာဖွေနေများအတွက်.
သုံးပြီးစုဆောင်း WhatsApp ကို
အသစ်က WhatsApp ကို၏အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုရှုထောင့် ယူအေအီးဖွံ့ဖြိုးရေး။ လတ်ဆတ်သရုပ်ြပအစိမ်းရောင်အရောင်နှင့်အတူစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အလငျး၌ရှေ့သို့ရွေ့လျားများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စ, ကုမ္ပဏီအဖြစ် မိုဘိုင်းစုဆောင်းမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ရှုထောင့်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 များအတွက်ကြီးမားသောဖြစ်ပါသည်။ စုဆောင်းမှုအေးဂျင့်အားဖြင့်အပေါ်ငွေရှာ၏ဘာမျှမပြောပါရန်။ အလားတူပင် Facebook ကိုမိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများအကစွဲဖြစ်လာသည်။ ထိုအမဟုတ်ဘဲအပေါ်ပုဂ္ဂလိကချတ်အပေါ်သူတို့လုပ်နိုင်သလောက်အချိန်ဖြုန်း မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေ.
ဒူဘိုင်းကယောဘ WhatsApp ကို - အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေဘို့ယခုသုံးပါ။ ပိုပြီး Find ဒူဘိုင်း, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အကြောင်းကို.
စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သင်ပင်ပန်းဖြစ်နှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့နှင့်မိုဘိုင်း application ကိုမလှယျကူပါလိမ့်မည်ဤနည်းကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ Whatsapp အလုပ်အတွက်ပင်ပန်းတယ်နေ့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှာဖွေပြီးနောက်သင်ကချလတံ့သောအဆုံးရန်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ် ၏ရှုထောင့် ယူအေအီးအတွက်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းအလုပ်လာပြီ။ တစ်ဖွဲ့လုံးအသစ်ကနှစ်လိုဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှုထောင့်တွင်ပိုမိုငွေရှာသင်တက်ရလိမ့်မယ်။
WhatsApp ကို အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေး privacy ကို
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူယခုကနေသေးတယ်သိရသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကြောင်း WhatsApp ကို နောက်ဆုံးမှာကြောင်းအမှု၌အစိမ်းရောင်အရောင်အဘို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၌ဤမိုဘိုင်း application ကိုသုတေသနပြုရန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင် app ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင်သည်အခြားလူ့အကောင်းဆုံးရှိပါတယ်တဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်စေမည်, စကားပြော ဒူဘိုင်းအတွက်အနှစ်သာရအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အရင်းအမြစ်။ ရေရှည်မှာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ပထမဦးဆုံးတဲ့အခါသင်ဖုန်းကိုအသုံးပြုပါ။ မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးအဖြစ် သငျသညျအခွားသူမြားနှငျ့ဆကျသှယျစဉ်ဒီဂျစ်တယ်ပုဂ္ဂလိက၌သင်တို့၏အသေးစိတ်စောင့်ရှောက်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတ်ကို၏, ဖြစ်စေအမှု၌, အသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ခိုးယူနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ privacy ကိုအထူးသဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်အလွန်အလေးအနက်ထားလိုသည်။ တစ်စီးတီးအဖြစ်ဒူဘိုင်းအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဖြစ်ပါသည်.
ဒူဘိုင်းကယောဘ Whatsapp - ဘယ်လောက်ရလဲ? သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေအပေါ်နိဂုံးချုပ်
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ WhatsApp ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် app ကိုသီးသန့်အလုပ်မုဆိုးများအတွက်အသုံးဝင်သော tool ကိုဖြစ်လာသည်။ အနှစ်သာရထဲမှာ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာနေကြသူတစ်ဦးကလူများအတွက်။ ဤအချက်များပေးထားတစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဘို့မိမိတို့စမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြု. ရဲ့ 2019 ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှု။ စုစုပေါင်းသင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ WhatsApp ကိုအုပ်စုများအပေါ်အားကိုးနိုင်ပါတယ်။ ကျိန်းသေကြည့်ရှုခြင်းနှင့် WhatsApp ကိုအုပျစုအပေါ်မှီခို ပို. အလျင်အမြန်ထက် ထိုကဲ့သို့သော Facebook သို့မဟုတ် LinkedIn တို့ကဲ့သို့သောသို့မဟုတ်ပင်အီးမေးလ်တစ်စောင်နှင့်အတူလူမှုရေးမီဒီယာကိုသုံးပြီး။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိနေဆဲအခမဲ့င် WhatsApp ကိုသင်တစ်ဦးပရီမီယံအကောင့်ဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်အလုပ်ရရန်အပိုကြေးပေးဆောင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ပိုပြီးအဘို့သို့ရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်းသင့်ကိုယ်ပိုင်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံကယျတငျနိုငျအနှစ်ချုပ်ရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှု လူအပေါင်းတို့သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကျော်.
သငျသညျ Whatsapp တို့ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ရှာဖွေတဲ့အခါမှာယေဘုယျအားဖြင့်တကယ်ရှိပါတယ်တဲ့ Win-Win အခွအေနေစကားပြော။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အနှစ်သာရ၌သငျလိမ့်မည် 85% အတွက် တောင်အာဖရိကကနေဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ သင်တစ်ဦးစုဆောင်းမှု tool အဖြစ် WhatsApp ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ။ WhatsApp ကိုကိုအကောင်းဆုံး tool ကိုသောကွောငျ့ အသစ်နှင့်တည်ရှိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်။ Whatsapp အပေါ်ဂျော့ဘ်ကိုရှာတှေ့ဖို့လွယ်ကူဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်ရှာဖွေစုဆောင်းမျက်နှာနီးပါးမျက်နှာသို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
WhatsApp ကိုကအိန္ဒိယအတွက်အလွန်ရေပန်းစားသောတမန်ဖြစ်၏။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်တတ်နိုင် ဒူဘိုင်းအတွက်အိန္ဒိယနှင့်အဘူဒါဘီကနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုအလွယ်တကူရှာတွေ့။ နိုင်ငံတကာကစားသမားဘစျေးကွက်အတွင်းမှပြည်တော်ပြန်ကူညီပေးနေကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ။ ဤအချက်များအရသင်ကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်တစ်ဦးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအသစ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ဒူဘိုင်းမှာအလုပ်ရှာနေ မင်းတို့ WhatsApp Group ကိုဒူဘိုင်းမှာသွားသင့်တယ်။
ကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်တွင်သင်၏အသေးစိတ်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရတဲ့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုတိုးမြှင့်ကိုရှာဖွေပါ။ သငျသညျဒူဘိုင်းမြို့တော်၌အကြှနျုပျတို့၏အုပ်စုတစ်စု join နှင့်အချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုများမှသင့်ရဲ့ဖုန်းကို Add သင့်ပါတယ်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပေါ်မှတ်ပုံတင်မည် ဒူဘိုင်းကယောဘ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ယခုကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။